ရိုမီယို2( ဇတ်သိမ်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရိုမီယို2( ဇတ်သိမ်း )
ရိုမီယို2( ဇတ်သိမ်း )
Posted by sorrow on Sep 11, 2013 in My Dear Diary | 12 comments
2006 ၏ အစောပိုင်းနေ့ရက်များတွင် ….မိုးပြိုမည့်ဇတ်လမ်းစတင်ခဲ့ပါပြီ…လူတကာကို ဟောက်စားလုပ်နေသော ရုံးခန်းအတွင်းမှ ဖုန်းသံကထမည်လာသည်..
..” ကို..ကလေးအင်တာဗျူးအောင်တယ် ” ဘာအင်တာဗျူးမှန်းတော့မသိ ….
” အေး…cheer ကွာ….တော်ချက်.. ”
” ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့တော့ ”….
.အမိန့်သံပါသော တောင်းဆိုမှု အောက်တွင် ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကြီးတွင် GRO ခေါ် ဧည့်သည်ဆက်ဆံရေးအရာရှိ တာဝန် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ..အုံးမရှိသည့်ငနဲမှာ…အထုတ်ကောက်ဆွဲဆင်းချ လာတော့သည်….
”မသွားပါနဲ့ကလေးရယ် ” ” မသွားလို့မရဘူး…အကုန်စီစဉ်ပြီးနေပြီ ”
တောင်းပန်သံအဆုံးတွင် တုံ့ပြန်သံက နင့်ကနဲ…..အံကြိတ်ထားသဖြင့်…သူ့မေးကြောလေးများပင် ထောင်နေပြီ…….
ပေါကြောင်ကြောင်ဇတ်ကားများကြည့်ပြီး….လေယာဉ်မယ်ဖြစ်ချင်သော စိတ်က …ထိုမျှပြတ်သားခိုင်မာမည်ဟု…တချိန်က စိုးစဉ်းမျှ မထင်ခဲ့…
..သူမေ့လျော့သွားပါပြီ….တတိယနှစ်ဂျာမန်ကျောင်းသူဘ၀ က တောင်တမန်အင်းမှ တိုင်လုံးကြီးများဖက်ပြီး…..စပ်ဖြဲဖြဲနှင့်ပေးခဲ့သော ..ကတိများက အရာမထင်တော့…..မန်းလေးကျုံးဘေးက …ဒန်တန့်တန် နေ့ရက်များကို…သူတကယ်မေ့လျော့ခဲ့ပါပြီ……..
လေဆိပ် Departure ……
ဆံပင်ပိုနီတေးလ် လေး…pencil heel နှင့်..စတိုင်ပန်အကျပ်လေး…၀တ်ထားပုံက …ယခုပဲထပျံတော့မည့်လေယာဉ် နှင့်အပြိုင် ..၀င့်ဝင့်ထည်ထည်ရှိလွန်းပါသည်……..
” ကလေး…ကို့ကိုချစ်တယ် ” ….မျက်နှာဝင်းဝင်းလေးက …၀မ်းနည်းသည့်အရိပ်အယောင်လုံးဝ မရှိ…..ပီဘိ အရုပ်သစ်ရထားသော…ကလေးငယ်သဖွယ်….
ရင်ထဲတွင် ဘလောင်ဆူနေသော်လည်း….ဟန်ဆောင်အပြုံးဖြင့်…”.အတူတူပါပဲကွာ” ပြောရင်း….သူ့ပါးပြင်လေးကို နမ်းလိုက်သည်…..ထိုအနမ်းက ၇င်ကိုနာကျင်စေသည့်အပြင်…..မျက်ရည်က ပေါက် ကနဲ…….
ဖုန်းလေးဆက်မည့်အသွင်….လုပ်ပြရင်း….ချာကနဲ ..လှည့်ထွက်သွားသော..သူ့ကျောပြင်လေးကို ကြည့်ရင်း…..အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားပါပြီ……..ကောင်းကင်ပေါ်ထိုးတက်သွားသော …လေယာဉ် နှင့်အတူ ..နှလုံးသားတခုလုံးပါသွားပါပြီ……..
ပျံ့လွင့်နေသော စိတ်တို့ က ဟိုဒီ ကိုပြေးလွှား လျက်……နှစ်သစ်တခုကိုထပ်မံရောက်ရှိပြန်ပါပြီ…..ဒါဏ်ရာတို့ကလတ်ဆတ်နေဆဲ….
” ကို…ကလေးခွင့်နဲ့ ပြန်လာမယ် ”……ရူးခါမတတ်…မျှော်လင့်နေသော အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိလာပါပြီ……
သေမတတ်နာကျင်စေသော ဓါးတစ်ချောင်းအသဲထဲကို…ထိုးစိုက်ဖို့ပြန်လာမယ်မှန်းမသိသော …ငနဲတစ်ကောင်မှာ…သတ်ကွင်းထဲသွင်းမှန်းမသိ သော..နွားရိုင်းတကောင်ကို ..မြူးတူးတက်ကြွလို့……….
….ဂျင်းပန်အပြာအကျပ် လေးက …ပျော်ရွှ့င် ခြင်းတွေသယ်ဆောင်လာပါပြီ……..
“‘ ကို့ကို…အရမ်းလွမ်းတာပဲ “‘……သူ့အပြောမှာ ..အသည်းတစ်ခုလုံး အရည်ပျော်ခဲ့ပါပြီ……ထိုအချိန်က…မြေပြင်ကို ကျွန်တော်ထိတွေ့နေသလား မသေချာပါ………….ပေါ့ပါးတက်ကြွလျက်……..
အိမ်မပို့ပဲချန်ထားသော..ဒေါ် လာအကြွင်းအကျန်များမှ…..ဖယောင်းတိုင်ထွန်းထားသော.ညစာ အဖြစ်အသွင်ပြောင်းချိန်မှာ……..
သူ့မျက်နှာလေးက ၀င်းမွတ် ကြည်လင်လျှက်…
” ကို့ …ကိုပဲတချိန်လုံးသတိရနေတာ “‘ ……
” အဲ့ဆိုမနေပါနဲ့လား …ကလေးရယ် “‘ သူလိမ်တတ်မှန်းသိလျက်နှင့်ပင် …..ကျွန်တော်ယုံခဲ့မိပါပြီ…..
ခောတ်မှီတိုးတက်သော ..မြို့ ပြအငွေ့အသက်ကို ..သူခုံမင်နှစ်သက်မှန်းလည်း….ရိပ်မိခဲ့ပါပြီ…..
လက်စွပ်မောင်းကွင်း လေးကို စွပ်ပေးရင်း…..” ကို…ဒါလေးမြင်တိုင်း…ကလေးကိုသတိရနော်…ဖွန်မကြောင်နဲ့သိလား…” ထိုအပြောတွင် …ကျွန်တော်…ယစ်မူးခဲ့ပါပြီ……..ရင်ခွင်ထဲကွေးကွေးလေး…တိုးခွေ့ဝင်လာသောကြောင်လေးလို…..သူ့အသွင် က…..အပြစ်ကင်းလွန်းပါသည်….
” ကို ..ပိုက်ဆံဘယ်လောက်စုမိပြီလဲ” ”ဟင် ” ရသမျှအိမ်ပို့သော…ငနဲမှာလက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာက…ငါးထောင်ပင်မပြည့်….
”မိန်းမရော…ယူအုံးမှာလား..ဒီတသက် ” ”ဒီကိုလာဆိုတော့…သွေးမရှိဘူး..”…. ”.လစာဒေါ်လာ**ရာက တက်အုံးမှာလား…. ”
”ဒီဖိနပ်က…ကို့လစာလောက် ရှိတယ်….” အနက်ရောင်..pencil heel လေးကို မေးငေါ့ပြရင်း..မြန်မာကားများထဲမှ ဓနရှင်လေသံနှင့်.သူပြောသည်….သူ့လစာဒေါ်လာအထပ်လိုက်..
…နှင့် ယှဉ်လျှင်..ကျွန်တော့်လစာက ကလေးမုန့်ဖိုးသာသာ….ခနဲ့တဲ့တဲ့လေသံက .ကချင်ပြည်နယ်ကြီး မတိုးတက်သည်ကပဲ …ကျွန်တော့်အပြစ်လိုလို…
ကွာခြားလွန်းသော…ဘ၀နှစ်ခုကို …အချစ်တခုတည်းနှင့် ..ဆက်စပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော….ငတုံးတကောင်၏ ..ဇတ်သိမ်းက …မရှုမလှ…
တချိန်ကသူမြတ်နိုးခဲ့သော….ကျွန်တော့်မာနကို ..နင်းခြေဖျက်ဆီးသူ က…သူကိုယ်တိုင်……သူ့မျက်နှာလေး…ကဒေါသနှင့်အတိ….
ဒေါသနှင့်..နာနေသောမာန က…မြွေတစ်ကောင်လို ..ခေါင်းထောင်ထခဲ့ပါပြီ….မြစ်ကျိုးအင်း..ဇတ်လမ်းမှာ …ကျွန်တော်က ဇတ်ပို့နေရာက….
” လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်တော့….” ” မလိုက်ရင်.ကလေးနဲ့.ဇတ်လမ်းက ..ပြီးပြီ”…..မာထန်နေသောလေသံက.
တကယ်တမ်းထိုမျှလောက်….သူပြတ်သားလိမ့်မည်လဲ ….၀န်ခံရလျှင် မထင်ခဲ့…….
”မဖြစ်နိုင်ဘူး…ဖြူလေး…..” ”’…ငါမလိုက်ချင်ဘူး….”….မိန်းမတစ်ယောက်၏ လောင်းရိပ်အောက်မှ
…….တဖက်မှာက …အောင်မြင်စပြုနေသည့် …ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်သောနယ်ပယ်..ထောက်ပံ့ပေးရဦးမည့် မိဘနှစ်ပါး
” ကို့ကို အရမ်းစိတ်ပျက်တယ်…တကယ့်ယောက်ျားပျော့….” ဒေါသကြောင့်နီမြန်းနေသည်.သူ့အသွင်က…
.ပြန်ပြောစရာ …….စကားလုံးတစ်လုံးမျှ ကျွန်တော်…ရှာမတွေ့ခဲ့….သူမှုန်နေပါပြီ…သူဝတ်လာသော.
..အမည်းဝမ်းဆက်လေးက ….နှလုံးသားတခု၏ ..ဈာပန ကို..ကြိုသိနေသယောင်ယောင်……
” နေခဲ့လိုက်တော့…အားလုံးပြီးသွားပြီ…. ” မျက်နှာကိုစေ့စေ့ကြည့်ရင်းက …သူပြောသည်..
.ကျောပြင်လေးကို တရှိုက်မက်မက် …လှမ်းကြည့်ယုံမှတပါး….ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့….
နှစ်ချီကြာမြင့်ခဲ့သော….ရိုမီယို ဇတ်လမ်း၏ ဇတ်သိမ်းပိုင်းက …ထိုမျှ အပေါစားဆန်လိမ့်မည်မထင်ခဲ့..
အရင် အပိုင်း လင့်(ခ) ကို တင်ပေးဦးဟ။
နို့မို့ ဖတ်တဲ့သူတွေ မသိပဲ နေတော့မယ်။
နာ က မနေ့က လိုက်ဖတ်ထားလို့ တော်သေးးးးးး
ဘယ်လေယာဉ်ကြီးနဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကို သွားတာတုန်း??
နာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ဟိဟိ။
စိုင်း သီချင်းလေးကို သတိရလာပြီ။
ဖြူဖြူစင်စင် ကောင်မလေးကို ~~~
တကယ် ကြင်ကြင်နာနာ ချစ်ခဲ့လည်း~~~
ဘာမှ ရေရေရာရာ မတွေးရသေးခင်~~`
ခုတော့ နာနာကျင်ကျင် နှုတ်ဆက်ရပြီ~~~
အဲ့ရာ အပိုင်းတစ်နဲ့ နှစ် …
စကားအတင်းစပ်…ဘာစိုင်းလဲ ..မမ..အဲ့ကောင်က အပွေ..
( ကချင်ပြည်နယ်ကြီး မတိုးတက်သည်ကပဲ …ကျွန်တော့်အပြစ်လိုလို… )
ကချင်ပြည်နယ်က တိုးတက်လာပါတယ်ကွယ် ၊
ရထားကလွဲရင် မန္တလေးဆင်းဖို့ ခက်တာကလွဲလို့ပေါ့ ၊
အပိုင်း ၁ လင့်ခ် ပေးပါဦးလားဗျာ ၊
ပုံ / မနောမြေကို ချစ်တဲ့သူ
ကချင်လူမျိုး ၊ ပြင်ဦးလွင်သား အဟီး
ကချင်လိုတော့ တစ်ခွန်းပဲတတ်တယ် ၊
နန်းဖေ့ဂနိူင် စောရအိုင် တဲ့ ၊
အဲ့တာလေးနဲ့တင် အလုပ်ဖြစ်တယ်.. အဟီး
ဒီမန့်ချက်မှာဘဲ နီတာတွေ့လို မှတ်လိုက်ပြီ
နှလုံးသားတစ်ခုရဲ့ ဈာပန ဆိုတဲ့ စကားလုံးလိုမျိုး သဘောကျအိ
စာ အဖွဲ့အနွဲ့လေးကို အားကျမိအ်ိ
ရင်မော မိ အိ
ကျေးကျေးပါဗျာ….ကိုယ်တွေ့ကြီးဆိုတော့လဲ ..ကိုအလင်းဆက်ရယ်…ကြေကွဲ ..